Akụkọ banyere mgbanwe Google algorithm | Martech Zone
Tuzdee, Machị 20, 2012 Tuzdee, Machị 20, 2012 Douglas Karr
Mgbe ndị mmadụ gwara m na ha nwere mmadụ SEO saịtị ha dị ka a ga-asị na ọ bụ otu mmemme, a na m ajụkarị onye na-arụ ọrụ ahụ. Njikarịcha abụghị oru ngo nke na-amalite ma kwụsị. Asọmpi na-agbanwe mgbe niile, teknụzụ na-agbanwe mgbe niile, ndị na-ege ntị na-agbanwe mgbe niile… na Google Algọridim na-agbanwe mgbe niile. Anyị ebugoro na mbụ Google Panda gbanwere - mana ihe omuma a ka saa mbara. Nọgide na mgbanwe ndị a bụ mgbalị mgbe niile… ma na-emejuputa mmejuputa sitere na Google na mgbanwe algorithm nwere ike ịdebe gị n'ihu asọmpi gị ma melite nsonaazụ gị niile.
Ozi nkowa mgbakwunye site Ahịa Google Search ụlọ ọrụ, Outrider.
Tags: algorithm nke googlemgbanwe google algorithmgoogle gbanwere
Obere iji gụọ = /
Isi ihe! Anyị ga-etinye njikọ na ya ka ị nwee ike imeghe.
Ka mma ugbu a 🙂 Daalụ!
Emelitere m post ahụ Alexandre - ọ bụrụ na ị pịa oyiyi ahụ, ọ ga-akpọrọ gị gaa na saịtị nke isi nwere injin mbugharị na ya. Daalụ maka ịkwado nke ahụ na nlebara anya anyị!
Enwere m otu maka gị, enyi: Gịnị ka ị chere na ọdịiche dị n'etiti Panda na ntaramahụhụ kachasị-mma ga-abụ? Ugbu a, ọ dị ka ngalaba nke redundancy ngalaba na onye ọ bụla nke na-edegharị vidiyo kacha ọhụrụ nke Matt Cutts na Nlekọta Anya kachasị eleghị vidiyo ahụ n'ihi na isiokwu isiokwu na ederede zoro ezo na-ebute gị na nsogbu kemgbe iwebata Google Webmaster - Fall 2007 ma oburu na m cheta.
Google na - agbanwe agbanwe ma na - agbanwe agbanwe, mana o doro anya na afọ 2011 bụ nnukwu afọ. Google choro inye ndi oru ya ihe kachasi nma. Dị ka SEOs, ọ dị mkpa ka anyị mara mgbanwe mgbanwe algorithm ndị a ma debe taabụ na saịtị anyị.